Maxaad ka taqaan Taliyaha cusub ee Ciidamada Milateriga Soomaaliya..? (Aqri) | Www.tusmo.net
Maxaad ka taqaan Taliyaha cusub ee Ciidamada Milateriga Soomaaliya..? (Aqri)
Waxaa maanta taliye cusub loo magacaabay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu is casilay taliyihii hore Jen. Axmed Jimcaale Geedi (Cirfiid).
Taliyaha cusub ee ciidamada xoogga ayaa loo magacaabay Sareeye Gaas C/weli Jaamac Xuseen (Gorod), waxaana magacaabidiisa ansixiyay Golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo shirkoodii maanta uu hor keenay wasiiru dowlaha Gaashaandhigga.
Taliyaha cusub ee ciidamada xoogga Sareeye Gaas C/weli Jaamac Xuseen (Gorod)
Taliyaha cusub ee xoogga wuxuu ka mid ahaa musharixiintii xilka madaxweynaha ee Galmudug markii maamulkaasi la dhisay,waxaana dadka xilkan ugu hambalyeeyay ugu horeeyay madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Taliyaha cusub oo ay isku beel yihiin taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka ayaa ka mid ahaa ciidamada Cirka Soomaaliyeed, isagoo ka gaaray heer Duuliye diyaaradeed ah, Dhinaca kale wuxuu Wasiir ka soo noqday dowladii KMG ahayd ee madaxweyne C/qaasim Salaad, isagoo markaa ahaa Wasiirka Dekedaha xukuumadii Carte.
Dalka ayuu dib ugu soo laabtay isagoo xiddigle ah. Waxaana la geeyey xerada ciidanka cirka ee Balidoogle. 1980-kii waxa uu qaaday xidigii labaad waxaana loo badalay xeradii ciidanka cirka ee duleedka Kismaayo halkaasoo uu ku bartay duulimaadyada diyaaradaha xamuulka ciidanka.
Jeneral Gorod dowladii Carte ee Cabdiqaasim Salaad ayuu ka noqday wasiirka dekadaha. Labo sano ayuuna hayay xilkaasi. Jeneraalka waxuu dhalay sided caruur. Waxuuna degan yahay magaaladda London.
The post Maxaad ka taqaan Taliyaha cusub ee Ciidamada Milateriga Soomaaliya..? (Aqri) appeared first on Warqaad.com.